Ifulethi eliphambi kwemoto yekhebula yeVallnord-ipaki yebhayisekile
I-duplex esanda kulungiswa ecaleni kweVALLNORD - BIKE PARK (LA MASSANA) imoto yentambo (icandelo le-PAL), ine-75 m2, igumbi apho siza kubona khona imoto yekhebula "La Massana" kunye neembono ezintle zesekisi yaseMadriu (unesco indawo yelifa lemveli).)} kunye umandlalo isofa kunye umatrasi 1,50 yeemitha, ekhitshini yaxhobisa ngokupheleleyo ehlaziyiweyo, 2 okulala umphandle, 1 lokuhlambela epheleleyo kunye yangasese. Kuqaqambe kakhulu. Ixhotyiswe ngokupheleleyo. Zonke zintsha. Kukho indawo yokupaka iimoto zikawonke-wonke eziimitha ezingama-50 ukusuka kwigumbi lokuhlala).
I-Apartment ixhotyiswe ngononophelo olukhulu. Yonke into entsha, oomabonwakude, bonke ubunewunewu esinokulindela ukuhlala okuhle. Ineendawo zokumisa iibhasi njl kunye nendawo yokupaka yoluntu iimitha ezingama-20 ukusuka kwindawo yokuhlala. Ukuba ufuna ukutyibilika okanye ukwehla umnqantsa akufuneki ukuba uphathe imoto, sihamba umzuzu om-1 ukusuka kwigondola ekuthatha ikwenyukele kumathambeka eVallnord, icandelo lePAL kunye neBIKE PARK yokukhwela ibhayisekile ehlotyeni.
Ikhaya likaRicardo liseLa Massana, eAndorra.
Ixabiso elikhulu kakhulu esinalo yindawo, siimitha ezingama-25 ukusuka kwi-VALLNORD (PAL) imoto yekhebula. Kwisakhiwo esifanayo sinevenkile enkulu, kwaye ngaphakathi kwi-radius yeemitha ezili-100 sinekhemesti, iivenkile zokutyela, imivalo, i-bakery, ivenkile ye-pastry ... Unokuchitha ixesha elihle lokuhlala ngaphandle kokuchukumisa imoto, ugweme ukubeka amatyathanga ekhephu, ujonge. yokupaka, imingcelele ngaphandle ekwanti.
Isoloko ifumaneka kubathengi, ukuba andikho uyakubakho umntu oza kundithatha. Ungandibuza ukuba ndenze ntoni, indawo yokutya, nokuba uyafuna sinokucwangcisa uhambo olukhokelwayo lwentaba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Massana